मकवानपुर १९ माघ । हेटौँडा ५ पिप्लेस्थित जेनिथ इन्टरनेशनल बोर्डिङ स्कुल (सिटी कलेज) को विद्यार्थी बोक्ने बसमा हिजो शनिबार बेलुका अज्ञात समुहले आगो लगाइदिएका छन् । अज्ञात समुहले विद्यालयको कम्पाउण्डभित्र रहेको २ वटा बसमा आगो लागाएका हुन् । बेलुका करिब ९ बजे ना ७ ख ८७२८ र ना १ क ३२१८ नम्बरको बसमा आगजनी भएको […]
हेटौंडा, २९ पुस । तत्कालिन प्रदेश ३ सभामा प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ प्रस्ताव गर्न समर्थक नपाएपछि आक्रोश पोखेका छन् । उनले प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ प्रस्ताव गर्न फारम भरिसकेको थिए । तर, प्रस्तावको समर्थक नै नपाएपछि प्रदेशसभामा जारी बैठकमा नेवाः ताम्सालिङ प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेनन् । उनले पहिचानको मुद्दा लिएर जनतालाई आश्वासन दिने सांसदहरुले विभिन्न […]
हेटौंडा, २९ पुस । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा नेकपा नेता केशव स्थापितले मुख्यमन्त्रीलाई बारम्बार डाइलग हाने । पुस २६ गते तत्कालिन प्रदेश नम्बर ३ प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै प्रदेश सांसद स्थापितले मुख्यमन्त्रीलाई हेटौंडाको सडक विस्तारको कुरा उठाएर डाइलग हानेका हुन् । उनले मुख्यमन्त्रीबाट के आश गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ? मुख्यमन्त्रीलाई […]
हेटौंडा, २८ पुस । काभ्रेबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद रत्न प्रसाद ढकालले राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदनको जरुरी र औचित्यतामाथि प्रदेशसभा बैठकमा प्रश्न गरेका छन् । नेकपा सचिवालयले प्रदेशको अस्थायी राजधानीलाई नै कायम गर्ने गरी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्न निर्देशन दिएपछि उनले प्रतिवेदनको आचित्यतामाथि प्रश्न गरेका हुन् । ‘तत्कालिन सरकारले पहिला राजधानी जुन–जुन […]
मकवानपुर १२ असार । नेकपा मकवानपुरकी अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक बर्ष ०७६/०७७ बजेट माथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा एउटा कथा सुनाएकी छिन् । उनले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो कथा सुनाईन् । ‘गाउँमा २ दाजुभाईलाई भिन्द हुनपर्ने अवस्था आएछ, परिवारमा एउटा गाई रहेछ […]
मकवानपुर, १० असार । पदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दुई वटा कुराको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ५ औँ नगरसभामा आज बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । अशोकको बोट र सहिद स्मारकले आपूलाई मुख्यमन्त्री बनाएको पौडेलले बताए । उनले भने – ‘अशोकको बोट र स्मारकले मलाई […]
हेटौँडा, १४ भदौ । मकवानपुरको हेटौँडा १० राप्तीरोड नवलपुर टेम्पो पार्क नजिक रहेको साथीको मनी ट्रान्सफरमा ताला फुटाई रकम लुटिएको छ । मनी ट्रान्सफरमा ७० हजार नगद र रिचार्ज कार्डहरु समेत गरि १ लाख २५ हजारभन्दा बढी रम लुटिएको छ । रकम लुटिएको पुष्टि प्रहरीले पनि गरेको छ । सिसिटिभी फुटेजमा लुटेराले यसरी लुटेको देखिएको […]
–चन्द्र घलान हेटौँडा, ७ भदौ । हेटौँडेली गायक डेसस सेन्साको नयाँ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक सेन्साले तु खबर डटकमको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत आफ्नो ‘आमा’ बोलको गीतको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका हुन् । नितेश रिजालको एरेञ्जमा बनेको गीतमा गायक सेन्साकै शब्द छ । बाध्यताले आमाको काख र जन्मभूमिबाट टाढा भएका एक छोराको पिडा […]
हेटौँडा, ०२ भदौ । कुनै समयमा मन पराएको मान्छेलाई ‘आई लभ यु’ भन्न नसकेको पछि चर्चित गीत ‘आई लभ यु, मैले भन्नै सकिन’ बोलको गीत गाएका चर्चित गायक कमल के क्षेत्रीले अन्ततः आफुले चाँडै बिहे गर्ने कुराको खुलासा गरेका छन् । तु खबरसँगको अन्तरवार्तामा उनले ‘डबल माया’ बोलको गीतको बारेमा चर्चा गर्दै भविष्यमा आफु छिट्टै […]
हेटौँडा, २७ साउन । पत्रकार तथा साहित्यकार गिरिजा अधिकारीको शब्दमा रहेको ‘ए सरकार, हामी भयौँ बेरोजगार, कहिले हुन्छ हाम्रो घरबार’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो बजारमा आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको दिन पारेर भीमफेदी गाइजले यो म्युजिक भिडियोलाई बजारमा ल्याएको हो । पुष्पन प्रधानले स्वर दिएको गीतमा विकास पाण्डेको संगीत छ । रिकेश गुरुङ ‘की’ […]
मकवानपुर, २१ साउन । आईतबार टिप्परको ठक्करबाट मोटरसाईकलमा सवार एक युवकको ज्यान जानुका साथै थप एक गम्भिर घाईते भएपछि क्षतिपूर्ति सहित अन्य माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएको स्थानीयमाथि प्रहरीले आज अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ । स्थानीय र प्रहरीको झडपमा नेपाल तरुण दल हेटौँडा नगर अध्यक्ष सुनिल गिरी सहित २ जनालाई पक्राउ समेत गरिएको छ । […]
मकवानपुर १७ साउन । मकवानपुरको हेटौंडामा रहेका पानी उत्पादक कम्पनीहरुको अनुगमन मकवानपुरको प्रशासनले गरेको छ । माई चोईस , आक्वा टाईम र अमृत जल नामक पानीमा किरा भेटिएको समाचार तु खबरमा प्रकाशन भएपछि जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रमुख र पत्रकारहरु सहित आज पानी कम्पनीहरुको अनुगमन भएको हो । अनुगमनका क्रममा पानी कम्पनीहरुमा कुच्चीएको जार […]
मकवानपुर, १५ साउन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले आज देशभर सरकार विरुद्ध सडकमा विरोध प्रर्दशन गर्ने केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार मकवानपुरमा समेत विरोध प्रदर्शन भएको छ । कांग्रेसले सरकार विरुद्ध कार्यकर्ता सडकमा उतारेर विरोध जनाएको हो । नेपाली काँग्रेस मकवानपुर जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको विरोध र्यालीले मकवानपुरका विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गरेको थियो । सरकारविरुद्ध कडा […]
मकवानपुर, २१ असार । काँग्रेस प्रदेश नम्बर ३ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश प्रमुखहरुको पद खोसिनु भनेको सरकारको दम्भ भएको आरोप लगाएका छन् । आज प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेशसभामा बोल्दै उनले नेपाली काँग्रेसले हिजोका दिनमा मानवताका हिसाबले सबै कुरा त्यागेर शान्ति सम्झौतामा आएको स्मरण गरे । उनले केपी शर्मा ओलीको निर्णय दम्भमा आएको […]
मकवानपुर, ०२ असार । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका जिल्ला सभापति एवं सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँले यही असार ५,६ र ७ गते हेटौँडामा हुन गइरहेको काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको भेला महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । ७७ वटै जिल्लाका सभापतिहरुको भेलाले काँग्रेसमा भएका गुटउपगुटहरुको समेत अन्त्य गर्ने ठोकुवा गरेका छन् । भेलाले महत्वपूर्ण विषयहरु टुङ्ग्याउने बारेमा उनले मुख खोलेका छन् […]
मकवानपुर, १ असार / आज प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले आउँदो वर्षको बजेट सँसदमा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले ३५ अर्ब, ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्री ढुंगेलले संघीय समानुकरण अनुदानबाट ५ अर्व ९६ करोड ९७ लाख, आन्तरिक राजश्वबाट ९ अर्ब ३३ करोड ३६ […]